के अभिभावकले कान्छो सन्तानलाई बढि माया गर्छन् ? – News Nepali Dainik
के अभिभावकले कान्छो सन्तानलाई बढि माया गर्छन् ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २७, २०७७ समय: १८:३२:४६
कुनै अभिभावकलाई तपाईंलाई कुन सन्तानको माया बढि लाग्छ भनेर सोधियो भने जवाफ आउँछ सबैको बराबर लाग्छ । स्वभाविक पनि हो आमाबुवालाई आफ्ना हरेक सन्तान उत्तिकै प्यारो लाग्छ । अर्थात आमाबुवाको माया हरेक छोराछोरीमा बराबरी हुन्छ ।
तर, अमेरिकामा भएको एउटा सर्भेक्षणले भने आमाबुवाले सन्तानमध्येमा कान्छो सन्तानको माया बढि लाग्ने देखाएको छ । अमेरिकाको ब्रिगम यंग यूनिभर्सिटीको स्कुल अफ फेमिली लाइफले गरेको सर्वेक्षणमा अभिभावकले कान्छो सन्तानलाई सबैभन्दा बढि माया गर्ने ठहर गरेको हुनत कान्छो सन्तानलाई बढि माया गर्नुको अर्थ अरु सन्तानलाई माया नगर्ने वा वेवास्ता गर्ने भन्ने हुदैँन । अभिभावक पहिलो पटक आमाबुवा बन्न पाउँदा जेठो सन्तान विशेष मान्दछन् । तर, पहिलो सन्तानपछि अरु सन्तान भएपछि आमाबुवाको माया स्वभाविक रुपमा बाँडिन्छ । यस्तोमा कान्छो सन्तान सानो भएकै कारणले उसको हेरचाहमा अभिभावक बढि केन्द्रित हुदा उसप्रती बढि माया गएको देखिन्छ ।
कतिपय जेठो माइलो वा कान्छो अघिका सन्तान आफ्ना अभिभावकबाट कम माया पाएको गुनसो गर्छन् । कतिपय अवस्थामा यही भावनाले दाजुभाई र दिदीबहिनीबीच मनमुटाव समेत हुन्छ । तर अभिभावकले गर्ने मायाको मापन गर्न नसकिने भएकाले उनीहरुको प्रेमको तुलना गर्नु असम्भव झै हुन्छ ।
Last Updated on: January 11th, 2021 at 6:32 pm